Linus Inotsigira COVID Kubaya uye Inoshoropodza Vanopikisa | Linux Vakapindwa muropa
Linus inotsigira hutachiona hwe COVID uye inoshoropodza vanopikisa
Kutsamwa kwaLinus Torvalds kunozivikanwa, kusvika padanho rekuti aive ari kure neLinux kernel kuvandudza kwechinguva kuti aite maitiro ekugadzirisa. Zvisinei, vashoma vari kuzopokana nayenekuti yekutsamwa kwake kutsva.
Kuve seni ndiri weakasiya wenyaya muropa (ndakadzingwa kubva kumaforamu akasiyana siyana nekuda kwetsika yangu yekubuda panhau) Izvo zvaisambofa zvakaitika kwandiri kushandisa kernel vanogadzira tsamba yekutumira, yakachengeterwa vagadziri kuti vakurukure nezvehunyanzvi zvinhu, yekuparadzira rangano dzekupokana nezvezvirwere zveCOVID. Asi, zvinoita sekunge paive nemunhu akazviita.
Iyi inotevera meseji yakatumirwa kubva kuaccount yakanzi lkml@metux.net:
Uye ndinoziva * vazhinji * vanhu vasingazombotora chikamu mune iyi generic human experiment iyo inonyatso gadzira mutsva humanoid mujaho (iyo inogadzira uye inopedza iyo ine chepfu protein spike, iyo maitiro akateedzana haatarike sechinhu chechisikigo). Ndiri mumwe wavo, semhuri yangu yese.
Linus inodzivirira kupora
Torvalds, nekutapira kunomuonesa, Handina kuzeza kutaura maonero ako ekuti anti-jekiseni zvirevo hazvina zvazvinoreva uye zvinofanirwa kufuratirwa.
Sevha zvako kupenga uye nehunyanzvi zvisirizvo anti-jekiseni makomendi kwauri.
Iwe hauzive zvauri kutaura nezvazvo, hauzive kuti mRNA chii, uye urikuparadzira manyepo enhema. Pamwe unozviita nekusaziva, nekuda kwehutsinye. Pamwe urikuzviita nekuti wataura ne "nyanzvi" kana kuona YouTube mavhidhiyo evanyengeri vasingazive zvavari kutaura nezvazvo. Asi damn it, zvisinei nekwawakawana ruzivo rwako rwenhema, ini handisi kuzorega zvisina maturo zvako zvichipikiswa pane chero runyorwa rweLinux kernel hurukuro.
Kana iwe uine mibvunzo nezvekuti mRNA inoshanda sei, Linus inokusevha kubva pakuenda kuWikipedia.
Zvekuvakira kwako chete kana iwe uchizoda kuva neruremekedzo: mRNA haichinje yako maitiro akateedzana neimwe nzira. Ndiwo wakafanana wepakati - uye wenguva pfupi - zvinhu izvo maseru ako anogadzira mukati nguva dzese sechikamu cheyakajairika maseru maitiro, uye ese mRNA majekiseni anoita kuwedzera dosi yeawo avo akasarudzika akateedzana ayo anobva agadzira ako Akajairika maseru michina inogadzira izvo mapuroteni ekucheka-cheka kuitira kuti muviri wako udzidze kuzviziva.
Hafu-hupenyu hweMRNA maawa mashoma. Chero jekiseni mRNA ichave yaenda kubva mumuviri wako pazuva kana maviri. Hapana chinoshanduka mukufamba kwenguva, kunze kwekuti zvakasikwa "muviri wako ikozvino unoziva kuziva nekurwisa puroteni nyowani yekune dzimwe nyika" (iyo inowanzo tenderera kunyangarika nekufamba kwenguva, asi inogara kwenguva refu kupfuura mazuva mashoma). Uye hongu, muviri wako paunodzidza kurwisa izvo zvekune dzimwe nyika, ungangonzwa kunge shiti kwechinguva. Izvo zvakajairika, uye ndiko kuita kwechisikigo kwemasero ako anoshandisa zviwanikwa kudzidza kubata nekutyisidzira kutsva.
Linus anopedzisa meseji yake nerumbidzo yemutsa:
Saka usanzwe wakasununguka nenyaya yekuti coronavirus kesi dzakadonha zvakanyanya kukukomberedza. Hongu, vese avo vakabaiwa jekiseni vakakukomberedza vanokudziviriraiwo, asi kana paine kumwe kumuka, pamwe nekuda kweshanduro inopfuurika, iwe nemhuri yako muchave panjodzi huru kwazvo kupfuura vanhu vakabayiwa jekiseni nekuda kwekusaziva nekusaziva. Wana jekiseni.
Reka kutenda manyepo ekudzivirira-jekiseni. Uye kana iwe ukaomerera pakutenda kupenga kwekurangana dzidziso, zvirinani ZIVA MUROMO WAKO pairi.
Iyi iri blog yehunyanzvi, hatisi kuzopinda munhaurirano nezvezvakanaka nezvikanganiso zvemishonga. Mune mamwe mazwi, ini ndiri kuzodzima pachezvangu chero mhinduro dzinoita. Ndanyora zvakakwana mumakore maviri apfuura nezvekuti zvakaoma sei kuwana chokwadi pakati pevanyengeri, mamaneja ehukama neruzhinji rwevashandi uye vezvematongerwo enyika vachitsvaga chero chikonzero chekudzora rusununguko rwemunhu uye kuwedzera hutongi hwevanhu, sekunge kuwedzera mimwe mipiro kunyonganiso yakajairika.
Kunyangwe kubaya kana kusabaya ndiyo sarudzo yako zvinoenderana neruzivo rwunopihwa nachiremba wako waunovimba naye.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linus inotsigira hutachiona hwe COVID uye inoshoropodza vanopikisa
Pindura kuna wakawaka
Proton GE: Yakasiyana sei neProton?
Mapako & mawere Chikamu I: ikozvino kunze kweMinecraft vhidhiyo mutambo